सिफारिस Archives – Samacharpati
काठमाडौँ, २८ असार । तेत्तीस किलो सुनकाण्डका फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा फरार प्रतिवादी हरिशरण खड्का रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक नीरजबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उनी इन्टरपोलमा ‘रेडकर्नर नोटिस’ जारी भएका प्रतिवादी हुन् । अध्यागमनका कर्मचारीले उनको पहिचान गरेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए […]
काठमाडौं, २८ असार । नेपालमा शनिबारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १६ हजार सात सय १९ पुगेको छ । जसमध्ये आठ हजार चार सय ४२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज भएका घर फर्केका यी व्यक्तिमध्ये फेरि कोही व्यक्ति संक्रमित भएर उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका छन् तरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका […]
काठमाडौं, २७ असार । नेपालमा थप ७० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा थप ७० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्टि भएको बताएका हुन । उनका अनुसार देशभरका विभिन्न स्थानमा गरिएको परिक्षणका आधारमा थप ७० संक्रमण भएको पुष्टि भएको […]
काठमाडौँ, २७ असार । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी तीन दिन देशभर बदलीसँगै वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ । मनसुन न्यूनचापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिकै रहेकाले सोमबारसम्म उक्त प्रणालीको असर रहने भएको हो । हाल देशभर सामान्य बदली रही सबै प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ । दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही […]
काठमाडौं, २७ असार । केएमसी अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा गोकर्णका ५४ वर्षका पुरुष रहेका छन् । उनको उपचारका क्रममा असार २५ गते मृत्यु भएको थियो । असार २६ गते उनको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको केएमसी अस्पतालका निर्देशक डा. मुकुन्द राज जोशीले बताए । यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु […]
काठमाडौँ, २७ असार। मनसुन सुरु भएयता जेठ ३१ गते यता पहिरोबाट बढी क्षति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जस अनुसार मानिसको ज्यान जाने गरी विभिन्न १२ जिल्लामा बाढी र पहिरोजन्य ठूला विपद्का घटना भएका छन् । पहिरोका कारण हालसम्म ४६ जनाको मृत्यु भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन […]
काठमाडौँ, २७ असार । सरकारले अबदेखि सातै प्रदेशमा शुल्क तिरेर कोभिड–१९ को पिसिआर विधि परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले सरकारकै प्रयोगशालामामा निर्देशिका भन्दाबाहेकका मानिसले आफूलाई इच्छाएको बेला शुल्क तिरेर नमूना परीक्षण पाइने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललको अध्यक्षतामा यही असार २४ गतेको […]
पोखरा, २६ असार । गण्डकी प्रदेशमा थप १३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । क्षयरोग उपचार केन्द्र, पोखरा र पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा गरिएको परिक्षणमा गण्डकी प्रदेशमा १३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय, गण्डकीले जनाएको छ । आज बिहान १३ जना थपिएसँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ११६२ पुगेको छ । संक्रमित […]
काठमाडौं, २६ असार । डीभीमा छनौट भएका २६ सय नेपाली अब अमेरिका जान नपाउने भएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आप्रवासीहरूलाई सन् २०२० को अन्त्यसम्म नै प्रवेशमा रोक लगाएपछि डीभी लोटरी परेका नेपालीहरु अमेरिका जान नपाउने भएका हुन् । अप्रिल २३ देखि लागु गरिएको आप्रवासन भिसाको प्रतिबन्ध बढाएर डिसेम्बरको अन्त्यसम्म बनाइएको छ । जसको […]
काठमाडौं, २६ असार । विश्वभर फैलिएको महामारीका कारण संक्रमित हुनेको संख्या १ करोड २३ लाखभन्दा धेरै भएको छ ।वोल्डोमिटर्सको आज बिहानको तथ्यांक अनुसार विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १ करोड २३ लाखभन्दा धेरै भएको छ । तथ्यांकका अनुसार हालसम्म विश्वभर गरि कुल १ करोड २३ लाख ९० हजार ७ सय ३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्टि […]
कास्की, २६ असार । अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोमा परी गए राति पोखराका विभिन्न स्थानमा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने नौ जना घाइते भएका छन् । राति अन्दाजी २ः४५ बजेको समयमा पोखरा महानगरपालिका–१८ सराङकोट गोठादीस्थित टङ्कबहादुर थापाको घरमाथिबाट खसेको पहिरोमा पुरिँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । सो घटनामा परी घाइते भएका अन्य छ […]